ဟာကျူလီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
ရောမကျောက်သားရုပ်ကြွ (အေဒီ ၃ ရာစု)၊ ဟာကျူလီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်အစီစဉ်များကို သရုပ်ဖော်ထားခြင်း၊
ဟဲရာခလီးဇ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန် (၁၂) ရပ် (အင်္ဂလိပ်: Twelve Labours of Heracles or Hercules) ဆိုသည်မှာ ဟဲရာခလီးဇ်သည် မိမိကိုယ်ကို ဒဏ်ခတ်ခြင်းအနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဇာတ်လမ်းဖြစ်ရပ်တွဲကြီးတစ်ခုကို ဆိုလိုသည်။ ဟဲရာခလီးဇ်ကို ရောမဘာသာဖြင့် "ဟာကျူလီ" ဟူ၍ နောက်ပိုင်း၌ ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ယူအာရစ်သီးယပ်စ် (အဲရစ်တပ်စ်) ဘုရင်ကို အမှုထမ်းဆောင်ခြင်းဖြင့် အလုပ်တာဝန်များကို ပြီးမြောက်စေခဲ့သည်။ ထိုဇာတ်လမ်းများကို နောင်တွင် အဆက်မပြတ်သော ပြောရိုးစဉ်လာဇာတ်လမ်းများဖြင့် ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ ဘီစီ ၆၀၀ ခန့်က ကဗျာဆရာ ပိုင်ဆန်းဒါရေး၍ ယခုပျောက်ဆုံးနေပြီဖြစ်သော ကဗျာရှည်တစ်ပုဒ်၌ ဤဖြစ်ရပ် (၁၂) ရပ်အား ရေးသားခဲ့သည်ဟူ၍ ဂရိတို့က မှတ်ယူကြသည်။ ဟဲရာခလီးဇ်သည် ၎င်း၏ ဇနီး၊ သားသမီးများကို သတ်မိပြီးနောက် ဒဲလ်ဖီအရပ်ရှိ ရှေ့ဖြစ်ဟောနတ်ဆရာတစ်ဦးဆီသို့ သွားရောက်ခဲ့၍ အပေါလိုနတ်ဘုရားကို ကူညီလမ်းပြရန် ဆုတောင်လေသည်။ ဟဲရာခလီးဇ်ကို မိုက်ဆီးနီဘုရင် ယူအာရစ်သီးယပ်စ်ထံ ဆယ်နှစ်တာ အမှုထမ်းရန်ပြောဆိုမိန့်ကြားခဲ့သည်။ ထိုကာလအတွင်း ၎င်းကို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန် စေလွှတ်ခြင်း ခံရသည်။
ဟဲရာခလီးဇ်၏ တာဝန် (၁၂) ရပ်[ပြင်ဆင်ရန်]
ဟဲရာခလီး၏ တာဝန် (၁၂) ရပ်ကို ဆူဒို-အပေါလိုဒေါရပ်စ် ရေးသော ဘစ်ဘလီယာသီကာ (Bibliotheca) တွင် ရိုးရာ သမားရိုးကျနည်းဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း စီစဉ်ထားရှိသည်။
နစ်မီးယန် ခြင်္သေ့ကို သုတ်သင်ခြင်း။
ခေါင်းကိုးလုံး လေနားဟိုက်ဒရာ (ဟီဒရာ) ကို သုတ်သင်ခြင်း။
ကာရင့်နီယာ သမင်မကို ဖမ်းဆီးခြင်း။
အောဂျီးယန် မြင်းဇောင်းကို တစ်နေ့တည်းဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်း။
အားမဇွန် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် ဟစ်ပေါလစ်တာ၏ ခါးပန်းကြိုးကို ရယူခြင်း။
ခန္ဓာကိုယ် သုံးခုစာပမာဏရှိသော ဂီရီယွန် လူထွားကြီး၏ နွားကိုရယူခြင်း။
ဟဲစ်ပဲ့ရစ်ဒီးဇ် နတ်သမီးများထံမှ ရွှေရောင်ပန်းသီး သုံးလုံးခိုးယူခြင်း။
ဆားဘာရပ်စ် ခေါင်းသုံးလုံးခွေးကြီးကို ဖမ်းဆီး၍ ယူဆောင်လာခြင်း။
↑ Pseudo-Apollodorus (1921)။ "2.4.12"။ The Library (Greekဘာသာစကားဖြင့်)။ With an English Translation by Sir James George Frazer, F.B.A., F.R.S. in2Volumes။ Cambridge, Massachusetts; London: Harvard University Press; William Heinemann Ltd.။ CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link) At the Perseus Project.
↑ Isocrates။ "1.8"။ Isocrates (Greekဘာသာစကားဖြင့်)။ With an English Translation in three volumes, by George Norlin, Ph.D., LL.D.။ Cambridge, Massachusetts; London: Harvard University Press; William Heinemann Ltd.။ CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link) At the Perseus Project.
↑ According to Walter Burkert.[ကိုးကားချက်လိုသည်]
↑ Hard, p. 253.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟာကျူလီ၏_လုပ်ငန်းတာဝန်များ&oldid=642632" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၂၂:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။